आवाज विहीनहरुका लागि हाम्रो कार्यक्रमको ढोका सदाझैँ खुल्ला छः रबि लामिछाने - नयाँपुल अनलाइन डटकम
सालिकराम प्रकरणमा प्रक्राउ परेर रिहा भएपछी रबि लामिछानेले पहिलो पटक कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगमा आएका छन । उनि प्रक्राउ परेपछि News 24 ले करीब २ हप्ता रबि बिना खालि स्टुडियो बाट कार्यक्रम प्रशासरण गरेको थियो । कार्यक्रममा आएपछि रबिले के भने त हेरौ उनकाे भनाई जस्ताको तस्तैः
केही विश्रामपछि कार्यक्रम लिएर आएका छौं । सम्मानित अदालतले हामीलाई सालिक राम प्रकर*णमा चुइक्क नबोल्न आदेश दिएको छ । आदेश शिरोपर छ, श्री*मान । यसै पनि आफ्नै विषयमा विचारा धीन मु*द्धामा म किन बोल्थे र ! तर, यो देशका त्यस्ता सयौं–हजरौं मु*द्दाहरु छन्, जसको विषयमा बोल्न सकिएन भने चाँहि पाप होइन, महापाप लाग्छ ।
ठूला–ठूला मानिसहरु हाम्रा साना–साना बिषयको उठानाले किन ऐठानमा पर्छन् भन्ने कुरा हाम्रो टिमले कहिल्यै पनि पत्ता लगाउन सकेन। यो कार्यक्रम १०० वर्ष चल्यो भनेपनि हामीले गर्ने साना–साना कुरा मात्रै हो । आवाज नभएका मानिसहरु माथि चरम अन्याय भएको छ, राजनीतिज्ञको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँदा आम सर्वसाधारणको घरमा केही पनि नआउने ?
ती मानिस र तिनका परिवार कहाँ जाने ? गर्न खोजेको यत्ति हो कि तिनको आवाजलाई नेशनल मिडियामा स्थान दिने र आफ्नो पीडा आँसुसँगै भए प्रमाण नभए प्रमाणित हुन सक्ने आधारहरु सबै सामू राखिदिने ! आज पनि यही सानो काम निरन्तर गर्ने उही प्रति बद्धता दोहो–याउन चाहन्छु । घरखेत बेचेर एजेन्टलाई पैसा बुझाएर बसेको एउटा युवा पहिला देशभित्र ठगिन्छ ।
विदेश पुगे पनि उतै अलपत्र पर्छ । उसको पीडा कहाँ पोख्ने ? यही सानो कुरा नै हाम्रो लागि ठूलो कुरा हो । सबै पीडाको प्रमाण हुँदैनन्, कहिले काँही आँखाको भाका पनि पढ्नुपर्छ । विश्वासमा विना कागज २/४ लाख दिएर उल्टो आफै ठगीको मुद्धा खेपिरहेका मानिस घर–घरमा छन् । उजुरी कहाँ गर्ने ? प्रमाण के दिने ? तिनका कल रेकर्डिङ, टेक्स्ट म्यासेज हेरेर त्यस्ता पीडितका लागि कार्यक्रमको २/४ मिनेट खर्च गरेका हौं र यो गरिरहन पाँउ ।
हाम्रो पहुँचलाई देशै भरि पु-याउन धेरै गर्नुछ । अबको दिनमा त्यहि प्रयास गर्ने छौं । धेरैको आँसु पुछ्न पाएका थियौं, यस पटक विपतमा हाम्रो आँसु पुछ्न हात बढाएर तिर्नै नसक्ने गुण लगाइदिनु भएको छ। देशैभरिका र विदेशमा समेत रहनु भएका दर्शकहरु लाई सीधाकुरा टिमको नमन र सलाम ! शिर न आफ्नो झुकाउँछौं, न तपाईको झुक्न दिन्छौं ।
न्युज २४ टेलिभिजनको विशेष कार्यक्रम ‘सीधाकुरा जनतासँग’को आज ४२४ औं एपिसोड हो । कार्यक्रमको आजको एपिसोडमा पनि विगतका एपिसोडहरुमा जस्तै विभिन्न विशेष रिपोर्टहरु प्रस्तुत गरिएको छ, साथै सम्बन्धित ब्यक्तिसँग प्रत्यक्ष कुराकानी पनि गरिएको छ ।